Ukubaluleka nezinzuzo zokusebenzisa isikhumba ebusweni | Amadoda aSitayela
Kuyacaca ukuthi amadoda sinakekela isithombe sethu ngokwengeziwe nokuthi sikhathazekile ngokubukeka nokunakekelwa kwesikhumba sethu. Ngaphandle kwe- umswakama nentaba yamehlo iningi lethu eliyisebenzisayo, kunomkhiqizo ongasisiza kakhulu ukuzuza isikhumba esisha esihlanzekile, esinobuthaka, ukukhipha okhilimu.
I-Las ukukhipha okhilimu asusa amangqamuzana esikhumba afile, okuyizimbangela zokuvela okunganaki futhi kwesinye isikhathi okudala. Kungakho kubalulekile ukubafaka "emasikweni ethu obuhle" futhi sisebenzise zonke izinzuzo zawo esikhunjeni sethu.
1 Izinzuzo zokusebenzisa i-scrub
2 Uyisebenzisa nini futhi kanjani?
Izinzuzo zokusebenzisa i-scrub
Siza susa ukungcola okunqwabelana ezimbotsheni zesikhumba usuku lonke. Ukhilimu okhipha ukhipha isikhumba ugeza isikhumba ngokujula, usishiye singenakho ukungcola okukhiqizwa ukungcola noma izithukuthuku uqobo.
Ilawula ukunqwabelana kwe-sebum nokungcola esikhunjeni, kususa amakhanda amnyama noma amabala.
Kukhuthaza ukushefa. Ngaphezu kokuhlanza isikhumba kokungcola, isusa amangqamuzana afile aminyanise insingo futhi aphakamise izinwele zentshebe ukuze aphuce lula.
La isikhumba siyazivuselela njalo ezinsukwini ezingama-30, kepha lapho sesineminyaka yobudala, kufanele sikunikeze umfutho owengeziwe ukuze uqhubeke nale nqubo futhi ukukhipha okhilimu bangabahlanganyeli abahle kakhulu.
Lungisa isikhumba ukuqhubeka nokwelashwa kwakho kobuhle bese usebenzisa i-moisturizer.
Uyisebenzisa nini futhi kanjani?
Ngemuva kokubona izinzuzo esinazo ngesikhumba sethu, sebenzisa i- bhala, ungahlanyi futhi wenze umuthi nsuku zonke, ngoba singathola umphumela ohlukile walokho esikufunayo.
Okokuqala, khumbula lokho uhlobo ngalunye lwesikhumba ludinga ukukhuhla okwehlukile, ngoba kukhona abanye abanolaka kakhulu kunabanye.
Into ejwayelekile ukusebenzisa indlela ye- khuhla njalo ezinsukwini eziyi-15, kepha kuyiqiniso ukuthi uma unayo isikhumba samafutha nokuqoqwa kwenhlabathi kuma-pores kukhulu, ungakwenza kanye ngesonto. Lolu hlobo lukakhilimu akumele lusetshenziswe kabi njengoba isikhumba singalahlekelwa ukuqina futhi sikwenze ukuthi somile ngaphezu kokujwayelekile.
Ukufaka isicelo kahle i-exfoliant, kufanele uqale geza ubuso ngamanzi afudumele. Bese ugcoba ukhilimu ovuthayo emibuthanweni emincane ebusweni bonke ngokugcizelela kakhulu izindawo ezinamafutha ebusweni, okuthiwa indawo T (esiphongweni, ekhaleni nasesilevini). Kamuva, susa ngamanzi afudumele bese usebenzisa amafutha okuthambisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Ukubaluleka nezinzuzo zokusebenzisa isikhumba ebusweni
Ukubuya kwejakhethi ye-denim, okuyisisekelo esiphelele sentwasahlobo
Imibala ye-pastel yale Ntwasahlobo 2013